Vaovao Mafana · Aogositra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Aogositra, 2008
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Aogositra, 2008
Palestina : Hafaliana noho ny namotsorana ireo voafonja
Palestina 26 Aogositra 2008
Hafaliana no nitsenan'ny palestiniana ny famotsorana ireo voafonja 199 tany Israely. Tamin'ny Alatsinainy no nambara ny famotsorana azy ireo, ary mety nokendrena hifanindry amin'ny fahatongavan‘i Condoleezza Rice any Israely. Efa imbetsaka moa no nahemotry ny mpanatanteraka Israeliana ity famotsorana ireo voafonja ity ary nanao fifidianana telo izy ireo mikasika ity...
Shina : mampalahelo ny tongotr'i Liu
Shina 18 Aogositra 2008
Voatery niala an-daharana ilay mpihazakazaka kalaza, tompon-daka eran-tany amin'ny 110 metatra misy fefy tamin'ny lalao Olympika tany Athena, Liu Xiang androany maraina (ora any Shina) noho faharariana tamin'ny tongony. BEIJING (AP) — Defending Olympic champion Liu Xiang of China pulled out of the 110-meter hurdles Monday, walking away from the...
Kosovo 15 Aogositra 2008
Raha nanambara samirery ny fizakan-tenany i Kosovotamin’ny 17 febroary 2008, dia nizarazara be ihany ireo fiorenena maro manerantany ny amin’ny maha-aradrariny na tsia iny fihetsika iny Amin’izao fotoana izao, 45 amin’ireo firenena 192 mpikambana ara-dalàna ao amin’ny Firenena Mikambana no nankato tanteraka ny Repoblikan’i KosovoSinganina amin’izany ny firenena maromaro ao...
Libanona: Fanafihan'ny mpampihorohoro an'i Tripoli
Libanona 14 Aogositra 2008
Nahafaty olona 11, ka miaramila ny 9 amin'izany, sy naharatra 30 hafa ny fanapoahana baomba nataon'ny mpampihorohoro tany Tripoli, Libanona. Nangonin'i Moussa Bashir ny fanehoan-kevitry ny mpamaham-bolongana Libaley tamin'ity fanafihana ity.
Japàna: Te-hanakatona ny vohikalany ve Mainichi?
Japana 13 Aogositra 2008
Vaovao fhafa indray momba ny raharaha nampikorataba tany Japana momba ny WaiWai ( tsaho nalaza fa mpihaza ankizy ny Japoney sasany any Amerika Latina mba hohaniny), nisy vaovao [ja] nampiakatra ny isan'ny mpamaky any Japana milaza fa eo ampanadihadiana ny ahazoany manakatona ny gazetiny azo vakiana amin'ny aterineto ny gazety Mainichi. Saingy tetsy...
Shina: Mpihetsiketsika vahiny ampian'ny fitaovana 2.0
Shina 09 Aogositra 2008
Nisyfihetsiketsehana ho fanafahana an'i Tibet indray nitranga androany Sabotsy tany Beijing, ary hatreny amin'ny kianja malalaky ny Tiananmen mihitsy izany. Nanatrika izany ilay mpamahambolongan-dahatsary avy amin'ny Qik.com noneck ary azonao jerena izany..